Iphrofayela Yenkampani - Union Precision Hardware Co., Ltd.
Izinsizakalo Zomhlaba Wonke
I-Union Precision Hardware Co., Ltd.yinkampani esekwe eTaiwan yasungulwa ngo-1980, lapho inkampani eyayiyi- "Union Spring Metal Co., Ltd." futhi eyayizinze eHuizhou yaseChina ngo-1998. emakethe, inkampani yathuthela endaweni yefektri engu-20000㎡ kusukela ngo-2008, yashintsha igama yaba yi- "Union Precision Hardware Co., Ltd.". Siphinde samisa amanye ama-manufactories kulo lonke izwe laseChina ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Ngemuva kwalokho iqembu le-Union Metal injection molding (MIM) lasungulwa ngo-2010, futhi ladlulisa i-ISO 9001: 2008, SO 14001: 2004 ne-ISO / TS 16949: 2002 izophasiswa ngo-2017.
UMnyango Wezentwasahlobo onguchwepheshe wokukhiqiza intwasahlobo enembile, intwasahlobo emise okhethekile nedome kagesi. Imikhiqizo ifaka ukukhiqizwa okunembile nekhwalithi evelele, futhi iyasebenza embonini yezokuvikela kazwelonke, imboni yezimoto, imikhiqizo ye-hi-tech elekthronikhi, kanye nezokuxhumana, izinto zasekhaya zemidlalo yaseshashalazini, amathoyizi, okumile, nephrinta esebenza ngokuningi njll. futhi iyakwazi ukukhiqiza zonke izinhlobo zemithombo enobubanzi bezintambo zensimbi ezisukela ku-0.05mm-6.0mm nobubanzi bangaphandle busukela ku-0.3mm-80mm. Imikhiqizo ye-Union-spring yenziwa ngezinto zekhwalithi ngokusebenzisa imishini yama-computer kanye nemishini yokuhlola ngohlelo oluphezulu lwe-DCS lokulawulwa kwamakhompyutha. Hlanganisa ikhulu lemishini yasentwasahlobo yekhompyutha kanye noMEC waseJapan wakamuva, imishini yochungechunge lwentwasahlobo ye-ITAYA, inkampani iyakwazi ukukhiqiza iziphethu eziqondile neziphezulu zokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. IMIM Dept. -Sisebenzisa imishini eyaziwayo njengomshini wokujova we-Germany ARBURG, isithando somlilo saseJapan iShimadzu. Zonke izinto zokusetshenziswa esizikhethayo ezifana neGerman BASF, American CARPENTER, kanye neJapan MITSUBISHI. Yonke le mikhiqizo ihlinzeka ngozinzo oluphakeme nempahla ebonakalayo. Umthamo wokukhiqiza ungamboza ububanzi obungaphandle kusuka ku-6mm kuye ku-90mm. Kuyindlela enhle yokukhiqiza ukufeza izingxenye eziyinkimbinkimbi nokunemba kanye nenani elikhulu. Okubandakanya lezi zimboni ezilandelayo njengobuchwepheshe obugqokekayo, umakhalekhukhwini, ithebhulethi, ama-earphone lezi zinhlobo zemikhiqizo ye-3C ezintweni ezisetshenziswayo, amagiya anezinhlobo zemikhiqizo yamathuluzi
Ukuphikelela ekusebenzeni kwakhe wacabanga "ngamasu amasha, intuthuko nokweneliseka kwamakhasimende". Ngokwengeziwe, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zentuthuko yezimakethe zomhlaba, i-Union Manufacturing Engineering Dept. ibuye icwaninge njalo ukwehla kwezindleko nokwenza ngcono ikhwalithi, nokunikeza imikhiqizo eyi-100% ehlangabezana nezinga leJapan Industry Standard (JIS) kanye neAmerican Society for Testing kanye nezinto (ASTM), emazweni amakhulu ezimboni izidingo zemikhiqizo ejwayelekile. Imikhiqizo yethu izuze ukuzethemba okuphezulu ezinkampanini ezidumile eJapan, eMelika naseNingizimu Korea. Amakhasimende enkampani yethu afaka amabhizinisi anedumela emhlabeni afana neFoxconn, iKinpo Electronics, iSint, i-Amer, iPrimax Electronics, i-Epson, uMfoweth ', uKyocera, uCanon, uLexmark, uSony, uRicohNikon, uDefond Group njll.
I-Union ithembisa ukunikela ekuthuthukiseni inkampani yakho, futhi ilindele ukuzuza intuthuko efanayo ngekusasa eliqhakazile nawe. Uyemukelwa enkampanini yethu.
Cha .5 Chaoyanger Rd, Shiwan Town, Huizhou City, Isifundazwe saseGuangdong, 516127 China
Ucingo: + 86-139-2731-9288
Thola Incwadi Yezithombe yamahhala